🚀 Bitcoin Mining ho an'ny rehetra! | Crowd-Mining.io
Bitcoin Mining ho an'ny rehetra!
Tena faran'izay tsotra - Ny Server dia efa natsangana ary nihazakazaka. Mamorona kaonty ankehitriny. Ary hahazo ny Bitcoins voalohany. Mampiasa fotsiny ny Bitcoin cloud mining service!
Inona no hijoro amin 'ny.
Mahita ny zavatra mahatonga Crowd-Mining.io tsy manam-paharoa.
Bitcoin mining dia natao ho loharanom--mafy sy sarotra. Ny isan'ny vato hita ny Miners mbola miovaova. Taorian'ny mpizara mahita ny andian-tsoratra, dia mari-pankasitrahana ny tenany tamin'ny anjara Bitcoins. Amin'izao fotoana izao dia 25 Bitcoins anjara.
Tsy hanome ny mpampiasa vola ny fahafahana hampiasa vola amin'ny raharaham-barotra. Ary miorina amin'ny rafitra voalaza etsy ambony, no mahazo tombony isan'andro. Ankoatra izany, dia nilaza tamin'ny mpampiasa vola ny Daily-Mining-Newsletter.
Bitcoin Mining ny andian-tsoratra dia sarotra satria ny SHA-256 hash ​​ny kilalao miendrika biriky lohapejy dia tsy maintsy ho ambany noho na mitovy amin'ny lasibatra. Zavatra olana azo notsorina ho fanazavana tanjona: Ny Hash ny andian-tsoratra dia tsy maintsy manomboka amin'ny sasany zeros maro. Ny mety ho fikajiana ny hash izay manomboka amin'ny zeros maro no ambany dia ambany.
Araka ny voalaza etsy ambony, iray mandoro kajy matematika ezaka goavana. Noho izany, dia ilaina ny hijanona ka hatramin'izao amin'ny lohamilina. Isika ihany no mampiasa ny vaovao navoaka Bitcoin ASIC milina. Noho ny fiaraha-miasa lehibe, dia hahazo ny tsara indrindra ny vidiny eo amin'ny lohamilina vaovao.
Noho ny fampandrosoana ekipa, dia afaka nirehareha manambara fa manana zava-baovao Web-Dashboard navoaka ho an'ny mpanjifa. Ao izany izy ireo dia afaka hamerina ny Daily Mining vokatra. Ary mazava ho azy fa hividy ny fifanarahana manaraka.
Homeko ny manaiky, fa ny mailaka azo tehirizina.
Manaiky aho ny